Ultrasonic Synthesis of Molecularly Imprinted Polymers (MIPs) - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-Polymer Ama-Molecularly Imprinted (MIPs) angamamukeli aklanywe ngokufakelwa anokukhetha okunqunyelwe ngaphambili kanye nokucaciswa kwesakhiwo esinikeziwe se-molecule noma yamakhemikhali. I-Ultrasonication ingathuthukisa izindlela ezahlukahlukene zama-polymers ashicilelwe ngamangqamuzana okwenza i-polymerization isebenze kahle futhi ithembeke.
Yini ama-Polymer aqoshiwe we-Molecularly?
I-polymer ebhalwe ngamangqamuzana (MIP) iyizinto ze-polymeric ezinezimpawu zokuqashelwa ezinjenge-antibody ezikhiqizwe kusetshenziswa inqubo yokuphrinta kwamangqamuzana. Inqubo yokuphrinta yamangqamuzana ikhiqiza i-polymer efakwe ngamangqamuzana maqondana nengqamuzana elithile elihlosiwe. I-polymer efakwe ngamangqamuzana inezimbotshana kwi-matrix yayo ye-polymer enobudlelwano bokuthile okukhethekile “isifanekiso” i-molecule. Le nqubo ivame ukufaka ukuqalwa kwama-monomers lapho kukhona i-molecule yethempulethi ekhishwa ngemuva kwalokho, ishiye izimbotshana ezihambisanayo. Lawa ma-polymers asondelene ne-molecule yangempela futhi asetshenzisiwe ezinhlelweni ezifana nokuhlukaniswa kwamakhemikhali, i-catalysis, noma izinzwa zamangqamuzana. Ama-molecule abhalwe ngamangqamuzana angaqhathaniswa nokukhiya kwamangqamuzana, okufana nokhiye wamangqamuzana (okuthiwa i-molecule yethempulethi). Ama-polymers ashicilelwe ngamangqamuzana (MIPs) abonakala ngamasayithi abophezelayo ahambelana ngqo nama-molecule esifanekiso ngokuma, usayizi namaqembu asebenzayo. “Ingidi – key ”ivumela ukusebenzisa ama-polymers abhalwe ngamangqamuzana ezinhlelweni ezahlukahlukene, lapho kutholwa khona uhlobo oluthile lwe-molecule futhi lunamathiselwe kukhiye wamangqamuzana, okusho i-polymer efakwe emangqamuzaneni.
Umdwebo ohleliwe ukhombisa indlela yokuqoshwa kwamangqamuzana yama-cyclodextrins okulungiselela ama-receptors afanelwe.
Ukufunda nesithombe: Hishiya et al. 2003
Ama-polymers ashicilelwe ngamangqamuzana (MIPs) anensimu ebanzi yezinhlelo zokusebenza futhi asetshenziselwa ukuhlukanisa nokuhlanza ama-molecule we-biological noma amakhemikhali acacisiwe afaka ama-amino acid namaprotheni, okuphuma kuma-nucleotide, ukungcola, kanye nezidakamizwa nokudla. Izindawo ezifakwayo zisukela ekwehlukanisweni nasekuhlanzweni kuya ezinzwa zamakhemikhali, ukusabela okwenziwa ngamakhemikhali, ukulethwa kwezidakamizwa, amasosha omzimba eziphilayo kanye nezinhlelo zokuthola. (bheka uVasapollo et al. 2011)
Isibonelo, ubuchwepheshe be-MIP busetshenziswa njengenqubo yesigaba esiqinile se-micro-extraction ukusebenza nokuhlanza ama-molecule atholakala ku-cannabis afana ne-CBD noma i-THC kusuka ku-spectrum ephelele ukuze kutholwe izihlukanisi ze-cannabinoid nama-distillates.
I-Ultrasonic Synthesis yamaMolekyuli Afakwe Emzimbeni
Ngokuya ngohlobo lwethagethi (ithempulethi) nokusetshenziswa kokugcina kwe-MIP, ama-MIPs angahlanganiswa ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengezinhlayiya eziyindilinga ezinama-nano- kanye ne-micron, nanowires, nano-rods, nano-filaments, noma amafilimu amancane. Ukuze kukhiqizwe ifomu elithile le-MIP, amasu ahlukahlukene we-polymerization afana nokuphrinta ngobuningi, imvula, i-emulsion polymerization, ukumiswa, ukusabalalisa, i-gelation, kanye ne-multi-step swelling polymerization kungasetshenziswa.
Ukusetshenziswa kwe-low-frequency, high-intensity ultrasonics inikeza inqubo esebenza kahle kakhulu, eguquguqukayo futhi elula yokuhlanganisa ama-nanostructures e-polymeric.
I-Sonication iletha izinzuzo eziningana ekuhlanganisweni kwe-MIP uma kuqhathaniswa nezinqubo zendabuko yokwenza i-polymerization, ngoba ithuthukisa amazinga okuphendula aphezulu, ukukhula okunamandla kakhudlwana kwe-polymer chain, isivuno esiphezulu, nezimo ezinesizotha (isib., Ukushisa kokuphendula okuphansi). Ngaphezu kwalokho, ingaguqula ukusatshalaliswa kwenani labantu elibophezelayo, futhi ngaleyo ndlela, i-morphology ye-polymer yokugcina. (USvenson 2011)
Ngokusebenzisa amandla we-sonochemical kuma-polymerisation ama-MIPs, ukusabela kwe-polymerization kuyaqalwa futhi kube nomthelela omuhle. Ngasikhathi sinye, i-sonication ithuthukisa ukugcotshwa okusebenzayo kwenhlanganisela ye-polymer ngaphandle kokudela amandla okubopha noma ukuqina.
I-Ultrasonic homogenization, ukuhlakazeka kanye ne-emulsification kunikeza ukuxuba okuphezulu nokuxakaniseka ukwakha ukumiswa okufanayo nokuhlinzeka ngamandla okuqalisa ngenqubo ye-polymerization. UViveiros et al. (2019) uphenye amandla we-ultrasonic MIP synthesis futhi washo ukuthi "ama-MIPs alungiselele nge-ultrasonically ethula izakhiwo ezibophayo ezifanayo noma eziphakeme kunezindlela ezijwayelekile".
Ama-MIP ngefomethi ye-nano avule amathuba ethembisayo wokuthuthukisa ukufana kwamasayithi abophezelayo. I-Ultrasonication yaziwa kahle ngemiphumela yayo ehlukile ekulungiseleleni ama-nanodispersions kanye nama-nanoemulsions.
I-Ultrasonic Nano-Emulsion Polymerization
Ama-MIP angahlanganiswa nge-emulsion polymerization. I-emulsion polymerization ivame ukutholakala ngokwakha i-emulsion kawoyela-emanzini ngaphansi kokungezwa kwe-surfactant. Ukwakha isitebela, esilingana nano, inqubo yokusebenza kwe-emulsification ephezulu iyadingeka. I-Ultrasonic emulsification iyindlela esungulwe kahle yokulungiselela ama-nano- kanye ne-mini-emulsions.
I-Ultrasonic ingathuthukisa imizila elandelayo yokuhlanganisa yokukhiqiza i-nanoMIP: i-precipitation polymerization, i-emulsion polymerization, kanye ne-core-shell polymerization.
Ukufunda nesithombe ngo: Refaat et al. 2019
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwesifanekiso
Ngemuva kokuhlanganiswa kwama-polymers ashicilelwe ngamangqamuzana, ithempulethi kufanele lisuswe kusayithi elibophezelayo ukuze kutholakale ipolymer esebenza ngamangqamuzana asebenzayo. Amandla amakhulu okuxuba we-sonication akhuthaza ukuncibilika, ukungafani, ukungena nokuthuthwa kwama-molecule we-solvent kanye ne-template. Ngaleyo ndlela, izifanekiso zisuswa ngokushesha kumasayithi okubopha.
Isizinda se-Ultrasonic singahlanganiswa nesizinda seSoxhlet ukususa isifanekiso ku-polymer efakiwe.
I-Ultrasonic Processor UIP2000hdT
Imizila Ye-MIP Synthesis Esizwe Nge-Ultrasonically:
Ilawulwa Polymerization Radical
Ukuhlanganiswa kweCore-Shell Nanoparticle
Ukuhlukaniswa kwama-Polymer ahlanganisiwe
Izifundo Zamacala: Izicelo ze-Ultrasonic zeMolemerly Imprinted Polymer
I-Ultrasonic Synthesis yamaMolemende Aqoshiwe WeMolekyuli
Ukufakwa kwama-nanoparticles kazibuthe ngama-polymers afakwe ku-17β-estradiol kusetshenziswa umzila we-synthesis synthesis kufinyelela ekususweni okusheshayo kwe-17β-estradiol ezindaweni ezinamanzi. Ngokuhlanganiswa kwe-ultrasonic kwama-nanoMIP, i-methacrylic acid (MAA) yasetshenziswa njenge-monomer, i-ethylene glycol dimethylacrylate (i-EGDMA) njenge-crosslinker, ne-azobisisobutyronitrile (AIBN) njengesiqalisi. Inqubo yokuhlanganiswa kwe-ultrasonic yenziwa i-2h ku-65ºC. Isilinganiso sobukhulu bezinhlayiyana zama-NIP kazibuthe nama-MIP kazibuthe kwakungu-200 no-300 nm, ngokulandelana. Ukusetshenziswa kwe-ultrasound akugcini ngokukhulisa kuphela isilinganiso se-polymerization kanye ne-morphology yama-nanoparticles, kepha futhi kwaholela ekwandeni kwenani lama-radicals wamahhala, futhi ngaleyo ndlela, kwasiza ukukhula kwe-MIP ezungeze ama-nanoparticles kazibuthe. Amandla we-adsorption maqondana ne-17β-estradiol ayeqhathaniswa nezindlela zendabuko. [Xia et al. 2012 / Viveiro et al. 2019]
I-Ultrasonics yezinzwa ezibhalwe ngamolekyuli
Yu et al. yakhelwe inzwa efakwe emangqamuzaneni e-electrochemical based on nickel nanoparticle-modified electrodes for phenobarbital resolution. Inzwa ebikiwe ye-electrochemical yathuthukiswa yi-thermal polymerization kusetshenziswa i-methacrylic acid (MAA) njenge-monomer esebenzayo, i-2,2-azobisisobutyronitrile (AIBN) ne-ethylene glycol maleic rosinate (EGMRA) acrylate njenge-ejenti yokuwela, i-phenobarbitals (PBs) njenge-agent i-template molecule, ne-dimethyl sulfoxide (i-DMSO) njenge-solvent ephilayo. Enkambisweni yokuqamba inzwa, i-0.0464g PB ne-0.0688g MAA axutshwe ku-3 mL DMSO futhi enziwa i-sonicated imizuzu eyi-10. Ngemuva kuka-5 h, i-1.0244g EGMRA ne-0.0074g AIBN zengezwe engxenyeni zaphinde zanikezwa imizuzu engama-30 ukuthola izixazululo zepolymer ezifakwe yi-PB. Ngemuva kwalokho, i-10 μL ye-2.0 mg mL-1Isixazululo se-Ni nanoparticle siwele ebusweni be-GCE bese inzwa yomiswa ekamelweni lokushisa. Cishe i-5 μL yesixazululo se-polymer esilungisiwe se-PB sabe sesimbozwa kwi-Ni nanoparticle-modified GCE kanye nomshini owomile ku-75◦C nge-6 h. Ngemuva kokushiswa kwe-polymerization, inzwa efakiwe yagezwa nge (acetic acid) HAc / methanol (isilinganiso sevolumu, 3: 7) imizuzu engu-7 ukususa ama-molecule esifanekiso. (bheka u-Uygun et al. 2015)
I-Ultrasonic Micro-Extraction isebenzisa ama-MIP
Ukuze ululame ukuhlaziywa kwe-nicotinamide kusuka kumasampuli, kusetshenziswa i-ultrasonically assisted dispersive phase solid microextraction elandelwa yi-UV-vis spectrophotometer (UA-DSPME-UV-vis) iyasetshenziswa. Ekukhishweni nasekugxilweni kwe-nicotinamide (uvithamini B3), kusetshenziswe ama-polymers abhalwe ngamangqamuzana we-HKUST-1 (MOF). (Asfaram et al. 2017)
I-UIP4000hdT, i-mixer ye-high-shear enamandla ye-4000watts yokulungiswa kwe-inline
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu Wezicelo zePolymer
Kusuka eLab kuya Ekukhiqizeni nge-Linear Scalability: Ama-polymers ashicilelwe ngokukhethekile abunjwe ngamangqamuzana athuthukiswa kuqala futhi ahlolwe kubhulebhu elincane nakwisikali sebhentshi, ukuphenya ukuthi kungenzeka yini ukuhlanganiswa kwe-polymer. Uma ukusebenza nokwenziwa kahle kwama-MIP kufezekile, ukukhiqizwa kwe-MIP kukhuliswe kwaba yimiqulu emikhulu. Imizila yokuhlanganiswa kwe-ultrasonic ingaba konke ngokulinganayo kukalwe kusuka ebhentshini kuya phezulu ekukhiqizweni okuthengisa ngokuphelele. I-Hielscher Ultrasonics inikela ngemishini ye-sonochemical ye-polymer synthesis elabhoratri elincane nezilungiselelo zebhentshi phezulu kuze kufike ezinhlelweni ze-inline ze-inline ngokugcwele zezimboni zomkhiqizo we-24/7 ngaphansi komthwalo ophelele. I-Ultrasonic ingalinganiswa ngokulinganayo kusuka kusayizi weshubhu yokuhlola kuye emandleni amakhulu okukhiqiza amaloli amaningi ngehora. I-Hielscher Ultrasonics iphothifoliyo yomkhiqizo ebanzi kusuka kubhu kuya kusistimu ye-sonochemical yezimboni ine-ultrasonicator efaneleke kakhulu kumthamo wenqubo yakho ocatshangelwe. Abasebenzi bethu abanesikhathi eside bezokusiza kusukela ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Hielscher Ultrasonics – Izinsiza kusebenza ze-Sonochemical
Iphothifoliyo yomkhiqizo weHielscher Ultrasonics ifaka uhla oluphelele lwezinto ezisebenza kakhulu ze-ultrasonic ezincane nezincane. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic yenqubo yakho. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangwayo, ivolumu, okokusebenza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi. I-Hielscher ikusiza ukusetha inqubo ekahle ye-sonochemical.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Amanani amancane naphakathi nendawo angabhalwa kalula enqubeni ye-batch (isb., Izitsha, izivivinyo, amashubhu, ama-beaker, amathangi noma imiphongolo). Ngokucubungula okukhulu kwevolumu, i-sonication esemgqeni ingasebenza kangcono. Ngenkathi ukubheja kuthola isikhathi esiningi futhi kusebenza kakhulu, inqubo eqhubekayo yokuxuba ulayini isebenza kahle, iyashesha futhi idinga umsebenzi omncane kakhulu. I-Hielscher Ultrasonics inokusetha okufanele kakhulu kokukhipha ukusabela kwakho kwe-polymerization nenqubo yevolumu.
Izinketho ze-Ultrasonic zawo wonke amandla womkhiqizo
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza isibonisi esigcwele sama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla lomkhiqizo ogcwele lusivumela ukuthi sikunikeze okokusebenza okufaneleke kakhulu kwe-ultrasonic kwama-polymers akho, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Izinhlelo ze-Ultrasonic benchtop zilungele ukuhlolwa okungenzeka nokusebenza kwenqubo. Ukulinganiswa komugqa ngokuya ngemingcele yenqubo esungulwe kwenza kube lula kakhulu ukukhulisa amandla wokucubungula kusuka ezinkatho ezincane kuya ekukhiqizeni ngokugcwele ukuthengisa. Ukukhuphuka kungenziwa ngokufaka iyunithi enamandla kakhulu yokukhipha i-ultrasonic noma ukuhlanganisa ama-ultrasonicators amaningi ngokufana. Nge-UIP16000, i-Hielscher inikeza iyunithi enamandla kakhulu ye-ultrasonic emhlabeni jikelele.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kwe-sonochemical reaction kufaka phakathi ukusabela kwe-polymerization kanye nemizila yamagama.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunika ithuba lokuthi uhlanganise ama-polymers akho abhalwe ngamangqamuzana ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekayo yemiphumela emihle ye-polymerization!
Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunayo. Lokhu kwenza imishini ye-ultrasonic ye-Hielscher ithuluzi lomsebenzi elithembekile eligcwalisa izidingo zenqubo yakho ye-sonochemical.
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokuqaliswa okulandelayo ekukhiqizeni kwezebhizinisi. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakhuphula kanjani isivuno sakho se-MIP nekhwalithi.
Ungathenga iprosesa le-Hielscher le-ultrasonic nganoma yisiphi isayizi ehlukile futhi ilungiselelwe kahle kuzidingo zenqubo yakho. Kusuka ekwelapheni ama-reactants kushubhu encane yelabhu kuye ekuqhubekeni okuqhubekayo-ngokuxubana kwama-polymer slurries ezingeni lezimboni, i-Hielscher Ultrasonics inikeza i-ultrasonicator efanelekayo kuwe! Sicela uxhumane nathi – siyajabula ukukuncoma ukusetha okuhle kwe-ultrasonic!